ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်နေရသည့် ကလေးလူနာ ၄ဝဝ ကျော်အတွက် မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအ?? - Yangon Media Group
ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်နေရသည့် ကလေးလူနာ ၄ဝဝ ကျော်အတွက် မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအ??
ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီး ဝန်ထမ်းမိသားစု၊ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် မြန်မာ -တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း (ယာယီ) တို့ပူးပေါင်း၍ နှစ်သစ်ကူးအကြိုအ ဖြစ် ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်နေသည့် ကလေးလူနာ ၄ဝဝကျော်အတွက် နှစ်သစ်ကူးလက် ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ‘နှစ်သစ်ကူးအကြို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် ဆေးရုံတက် ကလေးလူနာများအား နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ပေး အပ်ခြင်းအခမ်းအနား’ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ရက်တွင် ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ ကြီး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
”ဒီနေ့က အစ်မတို့ရန်ကင်း ကလေးဆေးရုံကြီး နှစ်သစ်ကူးအကြိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအတွက်ကို ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းကရော မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း(ယာယီ)ကရော အစ်မတို့ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံက သူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ-တရုတ်ယဉ် ကျေးမှုအသင်း(ယာယီ)ကတော့ ကလေးတွေအတွက် ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းနဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် ကျပ် ငါးသိန်းလှူဒါန်းထားတယ်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းကလည်း ငွေ ကျပ် ၁၅ သိန်းလောက်လှူပါတယ်။ လာတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံး အ ယောက် ၄၅ဝ စာအတွက် အမှတ်တရပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းတာဖြစ် ပါတယ်”ဟု ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ အုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ-တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုအသင်း(ယာယီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှိုင်ဝင်းက ”ကျွန်တော်တို့ အသင်းရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဟာ ပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ မနှစ်က လည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း လှူဒါန်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒသဘောထား ကိုနားလည်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း အားဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေး ကိုအထောက်အကူပြုဖြစ်စေမှာဖြစ် ပါတယ်”ဟု နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
နှစ်သစ်ကူးအကြို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် ဆေးရုံတက် ကလေးလူနာများအား နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်ပေး အပ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ ရန်ကင်း မြို့နယ်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာ ဝန်ရှိသူများ၊ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ဝန်ထမ်းများမှ အက၊ အလှများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင် ဆက်ကာ ကလေးငယ်များကို နှစ်သစ်ကူး အမှတ်တရလက်ဆောင်များကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တိုက်ခန်းနှင့် ကွန်ဒို အခန်းပေါင်း ၁ဝဝဝဝ ခန့် ရောင်းချသွားမည့် (၁ဝ)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်င
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသား ခုနစ်ဦးကို ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့် ထော
မြန်မာ – တရုတ် ကုန်ဖလှယ်မှုစနစ်ဖြင့် ကုန်သွယ်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဘွဲ့ကြို ဒီပလိုမာသင်တန်းဖွင့်?
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ဒါးကကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား